Zircon manga ho an'ny peratra, rojo ary kavina - Blue zircon midika - video
Ny zircon manga dia midika hoe: ny vato manga manga marevaka indrindra ho an'ny firavaka, izay matetika ampiasaina amin'ny peratra, rojo ary kavina. Izy io dia fanomezana tonga lafatra ho toy ny peratra firavaka vita amin'ny volamena fotsy.
Misy karazana volom-bolamena mena izay mampifangaro ny hamafiny sy ny hafanana. Safira no malaza indrindra. Blaogera topaz no vatosoa marevaka malaza indrindra, ny loko dia avy amin'ny fandokoana topaz tsy misy volom-borona, avo dia avo amin'ny vidiny lafo be ary hita amin'ny tara-pahazavana, midadasika sy maizina ihany koa. Safidy hafa amin'ny vatosoa, anisan'izany tanzanite (manga-violet) sy akquamarine (manga manga). Tourmaline sy spinel dia hita amin'ny manga indraindray, saingy mahalana.
Ny vatosoa marevaka marevaka indrindra
Zirafy dia vato kanto indrindra amin'ny loko manga indrindra, ny endriny matevina kokoa dia avo kokoa noho ny safira, tanzanite ary ny spinel. Fa ny zircon dia tsy dia azon'ny olona fantatry ny besinimaro, izay mety ho sahiran-tsaina amin'ny cubic zirconia, diamondra vato simba. Zircon dia mineraly voajanahary, Afaka mahita silikily zirkonium amin'ny loko rehetra amin'ny zirona, anisan'izany ny tsy misy loko.
Blue zircon no loko tena malaza. Ny loko manga dia vokatry ny fitsaboana mafana amin'ny zircon volontany. Fa ny zircons rehetra volontsôkôla tsy ho manga rehefa mafana, ary vitsy ny zircons manana rafitra ara-batana mety ho manga rehefa mafana. Izany no mahatonga ny ankamaroan'ny vato ho avy any Kambodza.
Mivadika ho manga ny zirona mainty rehefa vita ny fitsaboana
Famaritana momba ny Gemolocial
Zircon voajanahary dia mineraly iray an'ny vondrona nesosilicates. Ny anarany simika dia zirconium silicate ary ny pormula simika mitovy aminy dia ZrSiO4. Ny endrika Zircon amin'ny silicate dia mitsonika miaraka amin'ny haben'ny hery mahery vaika tsy mifanaraka amin'ny singa. Ohatra, ny hafnium dia saika hita matetika amin'ny habe misy eo amin'ny 1 ka 4%. Ny rafitra kristaly an'ny zircon dia rafitra kristaly tetragonal.
Zircon dia ampahany betsaka amin'ny tany. Mitranga izany ho toy ny mineraly mahazatra ao amin'ny vato mahazatra, toy ny vokatra fototra kristaly, amin'ny vatomamy metamorphic ary toy ny fasika manimba ao anaty vatam-paty. Zavona kristaly lehibe no mahalana. Ny haben'ny habeny amin'ny vato granita dia manodidina ny 0.1 ka hatramin'ny 0.3 mm, saingy izy ireo koa dia afaka mitombo amin'ny habetsaky ny santimetatra maromaro, indrindra amin'ny megika pegmatites sy carbonatites.
Ny lokon'ny zirona dia miovaova tsy misy loko, mavo-volamena, mena, mavo, manga, ary maitso.
Misy mpivarotra jiro antsoina hoe "diamondra matura" ny sela tsy misy loko amin'ny zirona. Ny olona Kambojiana koa dia miresaka momba ny diamondra "Pailin". Fantaro fa tsy misy diamondra any Kambodza. Pailin no anaran'ny faritany ao Ouest any Kambodza, sisintany amin'i Thailand.
Ny zircon manga dia midika hoe fananana metafizika
Zavaboary hafa ho an'ny volana Desambra
Ny dikan'ny zirona manga dia manazava ny sainao. Ho ampahany amin'ny tombontsoany, ity vato vatosoa dia mamerina ny fahadiovanao. Izy io dia manasitrana ny angovo tsy mihetsiketsikao avy amin'ny adin-tsaina samihafa. Mahomby ampiasaina rehefa mahatsapa ianao fa be dia be ny angovo ao aminao na raha very ny fahatokisan-tenanao ianao.
Zirona voajanahary avy any Ratanakiri, Kambodza
Nanao firavaka firavaka izahay, ohatra: peratra zirona manga, rojo, kavina…
Mividiana zirona voajanahary ao amin'ny fivarotana
Pink Zircon, avy any Tanzania
Zirona, avy any Sri Lanka
Tags Kambodza, Pailin, Zircon